विशेष | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
महासमिति बैठकको बन्द सत्रमा जे देखियो-फोटोफिचर
काठमाडौँ,१ पुस । नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति बैठकको बन्द सत्र बिहानदेखि शुरु भएको छ ।बन्द सत्रमा महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले ‘साङ्गठनिक प्रतिवेदन’, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पार्टीको
अर्को निर्वाचनको तयारीमा जुट्न उपसभापति निधिको अपिल
काठमाडौं, २९ मंसिर । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सधैं पार्टीभित्र लडेर बस्ने कि निर्वाचनका लागि योजना बनाउने ? भन्दै अर्को निर्वाचनको तयारीमा जुट्न नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता सबैमा अपिल गरे । पार्टीको
काठमाडौँ, २९ मङ्सिर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले धनी बन्न विदेश जानु नपर्ने र घुस पनि खानु नपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार आयोजित ‘असल अर्थशास्त्र’ पुस्तक विमोचन
काठमाडौं, २९ मंसिर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले वर्तमान सरकार सबै मोर्चामा सफल भएको दाबी गरेका छन् । उनले भने,‘हामी कुनैपनि मोर्चामा असफल भएका छैनौं । यो सरकार
कांग्रेस महासमिति बैठक तामझामसहित सुरु (फोटोफिचर)
काठमाडौं, २९ मंसिर । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक तामझामसहित केहीबेर अघि काठमाडौंमा सुरु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकको उद्घाटन गरेका छन् । काठमाडौंको योगेम्बर पार्टी प्यालेसमा बैठक सुरु भएको
महासमिति बैठकको एजेण्डामा सहमति नभए अलगअलग प्रस्तुत हुन्छ : केसी
मंसिर २९, काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले महासमिति बैठकमा पेश गर्ने एजेण्डाका विषयमा सहमति जुटाउन भगिरथ प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम
महायज्ञमा स्वदेश र विदेशबाट दानवीरको ओइरो
ललितपुर । बिष्णुडोल खानेपानी आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि २६ मंसिरबाट ३ पुससम्मका लागि महालक्ष्मी नगरपालिका—८ बिष्णुडोलमा भइरहेको विराट ज्ञान धान्याचल महायज्ञमा स्वदेश र विदेशमा दान गर्नेहरुको ओइरो लागेको छ ।
इञ्जिनीयर्स एशोसिएशनको निर्वाचनमा चहलपहल(फोटोफिचर)
काठमाडौँ,२८ मंसिर ।नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएशनको ३२औँ कार्यकारिणी समिति र प्रादेशिक संरचनाका सातैवटा प्रदेश कार्यकारिणी समितिका लागि निर्वाचन शुरु भएको छ ।केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका १८ र प्रत्येक प्रदेश कार्यकारिणी समितिका १६÷१६
देउवा–पौडेल मिलाउन सानेपामा बैठक, मिल्ला त विवाद ?
काठमाडौं, २८ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा यतिवेला सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको विवाद मिलाउन अन्तिम बैठक जारी छ । पार्टीको संघीय संरचनाअनुसार परिमार्जित तथा
पार्टीभित्रबाटै सरकार र प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नु बकम्फुसे कुरा हो : मण्डल
मंसिर २८, काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सत्यनारायण मण्डलले भोलीबाट सुरु हुने स्थायी समिति बैठकमा सरकारको बारेमा समीक्षा हुने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेतवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहस मा
साना किसानको ऋण मिनाहा, कपडा उद्योगीलाई अनुदान र छुट
काठमाडौं, २७ मंसिर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विहीवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मंसिर २४ को मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेका
‘सरकारको गति हेर्दा अहिले गियर बढाएको छ, अहिले पिक-अप लिएको छ’
काठमाडौं, २७ मंसिर । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले अब बस्ने स्थायी समिति बैठकमा सरकारको बारेमा निर्मम समिक्षा हुने स्पष्ट पारेका छन् ।